Iinqwelomoya ezintsha ezisuka eAntigua ukuya eBarbados naseProvidenciales kwi-interCaribbean Airways ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelomoya ezintsha ezisuka eAntigua ukuya eBarbados naseProvidenciales kwi-interCaribbean Airways ngoku
Airlines • isikhululo • Iindaba zaseAntigua kunye neBarbuda • uhambo ngomoya • Iindaba zeBarbados Breaking • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Iinqwelomoya zicwangciselwe ukuqalisa ukusebenza ukusukela kwiveki kaDisemba 17, 2021 ngexesha leholide kunye nokwenza iAntigua idityaniswe ngakumbi nommandla kunangaphambili.
I-InterCaribbean Airways ibisebenza iAntigua ukusuka eTortola ukusukela ngo-2015 ukuya kabini ngeenqwelomoya zemihla ngemihla kunye nokuhamba kwe-AM kunye ne-PM, ukudibanisa iYurophu kunye ne-USA/Canada iinqwelomoya ezibotshwayo kunye noqhagamshelo lweAntigua kunye neenqwelomoya eziya phambili ezisi-8 eziya phambili.
Ngoku, I-interCaribbean Airways Kuyavuya ukwazisa ngenkonzo entsha yeAntigua eneenkonzo ezimbini ezintsha zeJet ezingamisiyo (ERJ145), ezidibanisa iAntigua (ANU) ne IBarbados (BGI) ngeenqwelomoya zokuqala ezimbini ngeveki, kunye nenkonzo engamisiyo ukusuka eAntigua (ANU) ukuya eProvidenceales (PLS).
The Barbados Indiza iyaqhubeka ngokukhawuleza ukuya eGeorgetown (GEO), eGuyana eneeyure ezi-2 zokubhabha kunye nexesha elifutshane lokuhamba. Indawo efanayo yoqhagamshelo eBarbados inikezela phambili nakwiSt Vincent kunye neGrenadines (SVD), iSt Lucia (SLU) kunye neGrenada (GND).
Ngethuba lokuqala i-Eastern Caribbean ngoku inokufumana inkonzo yejethi phakathi kweAntigua kunye Barbados, kwaye ukuya phambili ukuya eGeorgetown, okwenza oku kuqhagamshelo lwendiza ekhawulezayo kummandla.
Inkonzo entsha engapheliyo kwi-Providencenciales (PLS), iTurks kunye neZiqithi zeCaicos, ibonelela ngoqhagamshelo olukhawulezileyo ukuya eHavana (HAV), Cuba kunye naseNassau (NAS), Bahamas, naseKingston (KIN), Jamaica. Abahambi ngoku banokubhabha phakathi kweAntigua neHavana ngaphantsi kweeyure ezi-4 zexesha lokubhabha enika unxibelelwano olukhawulezayo olubonwe yimarike.
Cwangcisa iAntigua- Barbados-Antigua
I-JY 797 isuka e-Antigua ngo-2.30pm ifika eBarbados ngo-3.35pm (ngoLwesithathu nangoMgqibelo)
Indiza i-JY 792 isuka eBarbados ngo-12.10pm, ifika eAntigua ngo-1.15pm
I-JY 794 isuka e-Antigua ngo-1.45pm ifika e-Providenciales 2.45pm* (ngoLwesithathu nangoMgqibelo)
Inqwelomoya i-JY 795 isuka eProvidenciales ngo-10.30am, ifika eAntigua 1.30*pm
* Umahluko weyure e-1 ebusika phakathi kwe-Antigua kunye ne-Providenciales